Yintoni esinokuyilindela kwi-Apple ngo-2018 | IPhone iindaba
Siqala unyaka omtsha kwaye njengesiqhelo sibeka ukubheja kwethu kwinto esinokuyilindela kweyona nkampani ibalulekileyo emhlabeni. Emva kokuvala i-2017 ngezibane kunye nezithunzi (nganye iyabahambisa), iApple ijongene ne-2018 apho kuya kufuneka iqhubeke nokubonisa kwiimarike kunye nabangakholwayo ukuba iyaqhubeka nokufumana indawo yokuqala kwezona nkampani zibalulekileyo emhlabeni, kwaye ngaphezulu kwako konke, inempembelelo enkulu.
Iimveliso ezibhengeziweyo kodwa ezingekaziswa kwintengiso, ii-iPads ezintsha, ii-iPhones ezintsha, ukuvuselelwa okulindelweyo koluhlu lweekhompyuter zeMac ngeMac Pro phambi kwazo ... uluhlu lwemisebenzi esalindelweyo lubanzi kakhulu, kwaye sifuna ukushwankathela into esiza kuyibona ngokuqinisekileyo kwaye yintoni sinokubona kulo nyaka uqala namhlanje.
1 Oko siza kubona ngaphandle kwamathandabuzo: I-HomePod kunye ne-AirPower
2 IPad Pro entsha ngaphandle kwezakhelo
3 Ixabiso eliphantsi le-2018 ye-iPad
4 Iifowuni ezintathu ezintsha, ubungakanani bescreen esitsha
5 I-Apple Watch entsha ye-2018
6 Ukuhlaziywa kweekhompyuter zeMac
7 Ii-AirPod ezintsha
Oko siza kubona ngaphandle kwamathandabuzo: I-HomePod kunye ne-AirPower
I-Apple isenezikhundla ezininzi ezisalindelwe ngabasebenzisi bayo, ngamagama amabini achazwe ngokugqibeleleyo I-HomePod kunye ne-AirPower. Isithethi apho umgangatho wesandi uya koyisa ngaphezulu "kobukrelekrele" kunye nesiseko sokutshaja ngokungeniswa okuya kuvumela ukwenziwa ngokutsha kwakhona kwe-iPhone ngaxeshanye, iApple Watch kunye neeAirPods. Ukwaziswa ngo-2017, ukufika kwabo ngo-2018 ngokuqinisekileyo.
Ukubhiyozela i-HomePod kuya kuba sesona sithethi siphambili, kwaye xa sisitsho le nto siyithethayo kukuba i-Apple ayifuni ukwenza isixhobo kwisitayile seAmazon Echo okanye kwiKhaya likaGoogle. I-Apple ifuna isixhobo esinomgangatho obalaseleyo wesandi ukuba iyakwazi ukumisela iimeko zegumbi apho ikhoyo kunye nendawo ekuyo ngaphakathi kwelo gumbi ukuze ilungelelanise isandi kwezo meko kwaye isinike owona mgangatho uphakamileyo. Ngale nto inee-tweeters ezisi-7, nganye inomqhubi wayo, kunye ne-4-intshi woofer ejonge phezulu, ukongeza kwizithethi ezintandathu eziza kubamba ilizwi lethu ngaphandle kwengxaki.
Ngokucacileyo esi sithethi siza kuba nayo iSiri, kwaye kunye nomncedisi weApple sinokunika imiyalelo yezwi ukuqala ukudlala umculo okanye ukuthumela imiyalezo, umzekelo, kodwa ayizukuba nemisebenzi ephambili njengezithethi zokhuphiswano, ezingathandanga ngabaninzi. Iya kufumaneka ngombala omnyama nomhlophe, kwaye ukumiliselwa kwayo bekucwangciselwe u-2017, kodwa iApple ngomzuzu wokugqibela ilibazisile de kwaqala u-2018 awukho umhla ochanekileyo. Ixabiso layo liya kuba yi- $ 349 ngaphandle kokwazi ixabiso kwamanye amazwe ngaphandle kwe-United States.
Isiseko se-AirPower sika-Apple siya kuba yimveliso yokuqala yohlobo lwayo evela kwinkampani, ethi kude kube ngoku ikhuphe iziseko zombane kuphela kwi-iPhone. Esi sisiseko sokutshaja ngaphandle kwamacingo siya kuhambelana nomgangatho weQi, kunye nokwaziswa okutsha kwenkampani, ekubonakala ngathi ekugqibeleni igqibe ekubeni yamkele lo mgangatho weshishini. Iya kuhambelana nokutshaja okukhawulezileyo kwe-iPhone kwaye njengoko umfanekiso ubonakalisa iya kuba nakho ukuphinda iphindaphinde izixhobo zantathu ngaxeshanye. Kuphela yi-iPbone yamva nje (i-8 kunye ne-8 kunye ne-X), i-Apple Watch Series 3 kunye ne-AirPod kunye nebhokisi ehambelana nayo (ayikabikho) inokuphinda yenziwe kwakhona kwesi siseko. Asazi owona mhla (ekuqaleni kuka-2018) okanye ixabiso, nangona amahemuhemu ethetha ngesixa esingathethekiyo se- $ 199 eMelika.
IPad Pro entsha ngaphandle kwezakhelo
Nje ukuba sigqibe ngeemveliso esaziyo ukuba ziya kufika ewe okanye ewe, siqala ngamarhe malunga nokukhutshwa okutsha, kwaye ngaphakathi kwala marhe IPad Pro ngabalinganiswa abaphambili. Emva kokuphehlelelwa kwe-iPhone X enescreen esihlala phantse sonke isixhobo, kukho amathandabuzo ambalwa okuba i-iPad Pro iya kuba lilandelayo ukubandakanya olu loyilo lutsha. Inkqubo yokwamkelwa kobuso buka-Apple (i-ID yobuso) ayizukusilela kwezi iPads zintsha, kunye nePensile entsha ye-Apple ehlengahlengisiweyo. kwaye mhlawumbi nemisebenzi emitsha. Kucacile ukuba baya kubandakanya iprosesa entsha ye-A11 Bionic (mhlawumbi i-A11X njengoko iApple ihlala isenza ngeepilisi zayo).
Into engaziwayo ngokuqinisekileyo yinto eza kwenziwa ngu-Apple ngobungakanani bezikrini, kuba amahemuhemu ayaphikisana. Abanye bathi iApple iyakunamathela kubungakanani be-intshi ye-10,5-intshi, isenza i-iPad incinci ngenxa yale ndlela intsha yoyilo. Abanye bathi olu hlengahlengiso luya kufikelela kwi-intshi eyi-12,9. Into ebonakala icacile kukuba inkampani iya kuqhubeka nokubheja kwitekhnoloji yeLCD kwezi zikrini, kuba utshintsho oluya kwi-OLED luya kuba ngumceli mngeni omkhulu kwinqanaba lokuvelisa kunye ne-surcharge engafunwayo ngu-Apple kwiipilisi zayo. Umhla wokufayilwa? Ukubheja kuthetha emva kwehlobo.
Ixabiso eliphantsi le-2018 ye-iPad
U-Apple wasothusa kulo nyaka uphelileyo ngokusungula i-iPad 2017, ithebhulethi enexabiso eliphantsi eyayisungulwe yinkampani ukuza kuthi ga ngelo xesha, kumzamo ocacileyo wokuqinisekisa abantu ukuba bahlaziye ithebhulethi yabo okanye bayikhethe endaweni yezinye iindlela ezinokufikeleleka ngakumbi kwintengiso. Le iPad 2017 ibandakanye iprosesa ye-A9 eyinike amandla amakhulu, kodwa inenxalenye yayo engeyiyo kwiscreen, eyayikukuphosa kwiimodeli zangaphambili, kunye noyilo lwayo, nayo iyatyeba. Mhlawumbi ezinye zezi ngxaki zinokusonjululwa ngesizukulwana esilandelayo ukuba iApple ibhengeze le ntwasahlobo.
I-2018 ye-iPad inokuqhekeza irekhodi lexabiso langaphambili, iqala kwi- $ 259, nangona eli lihlebo elingazange liviwe kakhulu kwaye kubonakala kunzima ukubona ukuzaliseka. Mhlawumbi ngumzamo wamva nje ka-Apple wokuqalisa kwakhona imakethi eye yehla kwiindawo ezininzi kunye nokuphela kwendlela yokukhuphisana nenani elikhulu lamacwecwe aphantsi apho ukhuphiswano lukhukhula khona ezishelfini zeevenkile.
Iifowuni ezintathu ezintsha, ubungakanani bescreen esitsha
I-Apple isungule i-iPhone X ekudala ilindelwe kulo nyaka, isebenzisa isikhumbuzo se-XNUMXth ukusukela oko kwaziswa i-iPhone yokuqala. Emva kweenyanga zokucinga malunga nokuba inzwa yeminwe iya kudityaniswa kwiscreen ngasemva, U-Apple wakhetha ukwahlukana ne-ID yesazisi kunye nokwazisa inkqubo entsha yokwazisa ubuso, i-ID yobuso. I-iPhone encinci kodwa inescreen esikhudlwana, ibhetri entsha ye-L kunye noyilo olutsha olubuyela kwisinyithi nakwiglasi emva kweminyaka kusetyenziswa ialuminium njengeyona nto iphambili kwimveliso yayo edumileyo. Le iPhone X iya kuba yiyo ephawula indlela eya kuthi ihambisane nenkampani ye-smartphone kule minyaka izayo, kunye nokuthelekelela ukuba yeyiphi imodeli ye-iPhone esiza kuyibona kulo nyaka sele izele ngamanzi.
Kucingelwa ukuba iApple inokumilisela iimodeli ezintathu ezintsha ze-iPhone, ezinobungakanani obutsha beescreen ezimbini. I-iPhone XI enobukhulu obufanayo nemodeli yangoku (5,8 intshi), i-iPhone XI Plus ene-intshi ye-6,5 kunye ne-pixel density enokufikelela kwi-500 dpi kunye nohlobo lwe-OLED; kunye nenye imodeli eya kuba nexabiso eliphantsi ngobungakanani be-intshi ye-6,1 kunye ne-LCD screen. Zonke ziya kuba noyilo olufanayo, ngaphandle kwezakhelo, kwaye ziya kuhambelana nokutshaja ngaphandle kwamacingo, ukongeza ukubandakanya i-ID yobuso. Iiprosesa ezinamandla ngakumbi, ukuphuculwa kwebhetri kunye neetshipsi ezikhawulezayo ze-LTE zezinye zophuculo oluya kubandakanya ezi modeli zintsha zingafiki de kuphele unyaka.
I-Apple Watch entsha ye-2018
Iwotshi yeApple ihlala iphambili kumarhe ajikeleze inkampani, kwaye bekukho uqikelelo malunga notshintsho loyilo kwiminyaka embalwa ngoku. I-Apple Watch ihlala ingatshintshi kuyilo okoko yaqaliswa ngo-2015, kwaye ngo-2018 isenokuba ngunyaka apho sele ikwenzeka khona utshintsho olukhulu. Iscreen se-MicroLED sinokuyenza ukuba ibe namandla ngakumbi kwaye icekeceke, kwaye ubungakanani bayo buyenza igqibelele ukuba ibhedi yovavanyo luka-Apple kwaye izise obu buchwephesha kamva kwi-iPhone. Khumbula ukuba yile nto yenzekileyo kwiscreen se-OLED, esungule i-Apple Watch ngo-2015 kwaye ifikelele kwi-iPhone ngo-2017.
Xa uthetha ngeApple Watch, kukho intetho eninzi malunga nobudlelwane bayo nezempilo, kwaye malunga nokubandakanywa kwee-sensors ezintsha ezinxulumene nayo. I-Apple Watch entsha inokubandakanya iisenzi zokwenza ii-electrocardiograms kwaye ke ukwazi ukuya ngaphaya kwenqanaba lokubetha kwentliziyo elijongayo okwangoku. I-oximetry ye-pulse yokwazi uxinzelelo lweoksijini egazini kunye neenzwa zokulinganisa i-glucose yegazi nayo icingelisiwe kodwa kubonakala ngathi kunzima ngakumbi ukuba ifike kungekudala, ngakumbi imizuzwana. Le Apple Watch intsha, eya kuza kwiimodeli ezimbini (i-WiFi kunye ne-LTE), ayinakuze iboniswe kude kube ngu-Septemba, kunye ne-iPhone entsha.
Ukuhlaziywa kweekhompyuter zeMac
Iikhompyuter yenye yemisebenzi elindelwe ngu-Apple ixesha elide. Ezinye zeemodeli zazo ziyilo olungaguqulwanga kangangeminyaka, njengeMac, kunye ezinye zikwindawo ethile phakathi ezingaziwayo ukuba ziya kuya phi, njengeMacBook Air. Into eyenziwa yiApple ngeekhompyuter zayo ayaziwa, kwaye ihlala iyinto apho amarhe angaqhelekanga khona.
IMac Pro entsha sele ikhutshiwe nangona yazisiwe kuthi ngoJuni 2017, kwaye iya kuhlaziywa kulo nyaka. I-21,5 kunye ne-27-intshi iMac iya kuhlaziywa, nokuba kungokuphuculwa kwangaphakathi kuphela, njengoko bekusenzeka minyaka le kangangexesha elide. Ngaba unokukhetha phakathi kwegrey yeklasikhi okanye indawo engwevu yePro? Kubonakala ngathi akunakulindeleka, njengoko kubonakala ngathi akunakulindeleka ukuba baphinde babe nolwakhiwo ngokutsha kulo nyaka.
IMacBook iya kuba yimodeli yokuqala eza kuhlaziywa kulo nyaka. Ngezizukulwana ezibini emva kwayo, i-2018 ungabona ukubandakanywa kophuculo lwangaphakathi, kodwa akulindelwanga ukuba kuyakubakho utshintsho olukhulu phesheya. Kukwanokuthethwa okufanayo ngeMacBook Pro, uhlaziyo lwayo olungaphaya kokulinganiselwa ngaphakathi. Kuza kwenzeka ntoni kwiMac Mini kunye neMacBook Air? Zimbini zeekhompyuter abathi uninzi luye lwaphela, kodwa asazi nto malunga nezicwangciso zokwenyani ezinazo iApple nazo.
Kwaye iMac Pro? UApple uqinisekisile kunyaka ophelileyo ukuba iyasebenza kwiMac Pro entsha kodwa oko ngekhe kuphehlelelwe ngo-2017, ukongeza kwiscreen esitsha. Asazi ukuba iApple izakuyivula kulo nyaka, kodwa ukuba kunjalo, kuya kuba yinto eqhelekileyo ukuba yenzeke njengeMac Pro, ivele eWWDC 2018 kwaye isungule ukuphela konyaka. Amathuba okwandisa emva kokuthengisa kunye noyilo oluhlaziywe ngokupheleleyo xa kuthelekiswa nemodeli yangoku iqinisekile, kodwa akukho nto ingako siyaziyo malunga nale khompyuter intsha.
Ii-headphone ze-Apple ziyaqhubeka ukubangela uvakalelo kwaye yenye yezona mveliso ziphumeleleyo phakathi kwabasebenzisi, kunye nohlolo oluqinisekileyo. Emva konyaka ngaphezulu kwintengiso, kubonakala ngathi lifikile ixesha lohlaziyo olugqitha kwitshaja entsha ngokutshaja ngokunyanzelekileyo okwenziwe nguAppel ngoSeptemba 2017 kwaye engekafiki kwimarike. Ezi AirPods zintsha zinokubandakanya ukuphuculwa kwezona zinto ziphikisayo, ezinje ngokungabikho kolawulo lokuchukumisa yevolumu, ukongeza kuphuculo kwiBluetooth, njengokufakwa kwetekhnoloji ye-5.0 esele iziswe yi-iPhone entsha, okanye imibala emitsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Yintoni esinokuyilindela kwi-Apple kwi-2018
UTim Cook wenze ngaphezulu kwe- $ 100 yezigidi kulo nyaka